တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi bin Baharim အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi bin Baharim အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi bin Baharim အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Col. Abdul Razak Haron နှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ နှင့်နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ သတင်းအချက်အလက် များအပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု အန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးတွင် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှု များအား ပူးပေါင်းနှိမ်နင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား အဆင့်အလိုက် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေး၊ အားကစားအဖွဲ့များ အပြန်အလှန် စေလွှတ်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်စစ်ဘက်ဆေးပညာများ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်း နှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမလေးရှားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့ သည်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ မလေးရှားနိုငျငံသံ အမတျကွီး H.E. Mr. Zahairi bin Baharim အား လကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Zahairi bin Baharim အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Col. Abdul Razak Haron နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးမှုရရှိအောငျဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ နှငျ့နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးကောငျးမှနျသညျ့ ဆကျဆံမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေး ကိစ်စရပျမြား၊ သတငျးအခကျြအလကျ မြားအပွနျအလှနျဖလှယျရေးနှငျ့ အကွမျးဖကျမှု အန်တရာယျတားဆီး ကာကှယျနှိမျနငျးရေးတှငျ တပျမတျောနှဈရပျပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ မူးယဈဆေးဝါး တရားမဝငျကုနျသှယျမှု မြားအား ပူးပေါငျးနှိမျနငျးဆောငျရှကျရေး၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား အဆငျ့အလိုကျ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေး၊ အားကစားအဖှဲ့မြား အပွနျအလှနျ စလှေတျရေး၊ လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား တှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးနှငျ့စဈဘကျဆေးပညာမြား အပွနျအလှနျ ဖလှယျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျး နှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာမလေးရှားနိုငျငံသံအမတျကွီးတို့ သညျအမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့သညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr.Sun Guoxiang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရွှေကျင်မြို့၊ ကံ့ကော်ဝိုင်းရပ်ကွက်ရှိ ရွှေတောင်ဦးဘုရားတွင် ခေတ္တပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လျက်ရှိသည့် ရေဘေးရှောင်ပြည်သူများအား သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြားပြီး စားသောက်ဖွယ်ရာများပေးအပ်